दोहोरो अंकको लाभांश दिने गरी काम गरिरहेका छौं
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा अपि पावर नौलो कम्पनी होइन । २०७० सालमा स्थापना भएको कम्पनीले सुदूरपश्चिममा निजी क्षेत्रबाट पहिलो पटक जलविद्युत् आयोजना बनायो । हाल यस कम्पनीको सुदूरपश्चिममै दुई वटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् । कम्पनीले सोही क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो ४० मेगावाटको अर्काे आयोजना बनाउन लागेको छ । त्यसमा लगानी जुटाउन कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रक्रियामा छ । कम्पनीका कार्यकारी सञ्चालक सञ्जीव न्यौपानेसँग आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माको कुराकानी :
तपाईंहरूले केही समयअघि पनि १ः०.२९ को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्नुभएको थियो । अहिले पुनः सोही अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । चरणबद्ध रूपमा हकप्रद ल्याउनुको उद्देश्य के हो ?
अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो ८ मेगावाटको अपरनौगढ जलविद्युत् र ८ दशमलव ५ मेगावाटको नौगढ जलविद्युत् गरेर दुई वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । त्यस अलावा सोही क्षेत्रमा पुनः ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाएका छौं, जुन सुदूरपश्चिममा निजी क्षेत्रले बनाउन लागेको सबैभन्दा ठूलो हो । हालसम्म त्यसको ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
सोही आयोजनामा स्वपुँजीका रूपमा लगानी जुटाउन हामीले चरणबद्ध रूपमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेका हौं । केही महिनाअघि पनि हामीले ५७ करोडको हकप्रद शेयर विक्री गरेका थियौं । अहिले दोस्रो चरणमा पनि सोही बराबरको हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हौं ।
दार्चुला जिल्लामा बन्ने उक्त आयोजनामा ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान छ । त्यसमा ७० प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ हिमालयन बैंकको अगुवाइमा ऋण लगानी भएको छ । बाँकी रहेको ३० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भने कम्पनीले स्वपुँजीको रूपमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही स्वपुँजी जुटाउन नै हामीले चरणबद्ध रुपमा हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेको हौं ।
पहिलो चरणमा हामीले ५७ करोड रुपैयाँको हकप्रद शेयर निष्कासन गरेका थियौं । अहिले दोस्रो चरणमा सोही बराबरको हकप्रद शेयर निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । दोस्रो चरणको हकप्रद शेयर निष्कासनको प्रक्रिया पुगेपछि तेस्रो चरणमा १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नेछौं । सम्भवतः तेस्रो चरणको हकप्रद आगामी आर्थिक वर्ष निष्कासन हुनेछ ।
यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बनाउने हाम्रो प्रयास हो । अहिले हामीले त्यही गतिमै काम गरेका छौं । आगामी २०७९ साल फागुनमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । गत दसैंको घटस्थापनादेखि आयोजना निर्माण सुरु गरिएको हो । तोकिएको अवधिमै निर्माण सम्पन्न गरेर व्यावसायिक रूपमै विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । विशेषतः अहिले आयोजनाको बाँध निर्माण, विद्युत्गृह बनाउनेलगायतका काम भइरहेका छन् ।
ड्यामबाट चमेलिया नदीको पानी ३ दशमलव ३ व्यास भएको पाइपमार्फत ६ किलोमिटर दूरीमा रहेको विद्युत्गृहमा झारिनेछ । उक्त विद्युत्गृहमा १३/१३ मेगावाटका ३ वटा टर्बाइन हुनेछन् । त्यसबाट उत्पादित विद्युत १६ किलोमिटर लामो १३२ केभीको सिंगल प्रसारण लाइनबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसनमा जोडिनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् दार्चुला हुँदै कैलालीको अत्तेरियासम्म आउँछ ।
चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्ने हकप्रद शेयर विक्री हुन्छ भन्नेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
अहिले नेपाली शेयर बजारले गति लिएको छ । आईपीओ भएको भए आवश्यकभन्दा बढी आवेदन आउने थिए । तर, हकप्रद शेयर भनेको जोसँग कम्पनीको शेयर छ, उनीहरूका लागि मात्र पहिलो अधिकार हो । उनीहरूले नपाए मात्र लिलाम बढाबढमा अन्य योग्य लगानीकर्तालाई विक्री गर्ने हो ।
केही महिनाअघि ५७ करोड रुपैयाँको हकप्रद विक्री गर्‍यौं । अहिले सोही बराबरको हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दै छौं । त्यो सबै शेयर शेयरधनीबाटै उठ्छ भन्नेमा विश्वस्त भने छैनौं किनभने कतिपय लगानीकर्ता विदेशमा होलान्, कोहीलाई इच्छै हुँदैन होला । कतिपयसँग आवेदन दिन सक्ने क्षमता पनि नहुन सक्छ । त्यसले गर्दा शेयरधनीबाट शतप्रतिशत रूपमा शेयर खरिद नहुन पनि सक्छ । त्यसरी विक्री नभएको शेयर लिलाम बढाबढमा विक्री गर्छाैं ।
यद्यपि, सबै शेयरधनीहरूलाई यो हकप्रद नछुटाउन आग्रह गर्दछु । अहिले हाम्रा १ लाख ६० हजार शेयरधनी छन् । उनीहरूलाई १०० रुपैयाँमै शेयर पाउनु अवसर हो, जुन शेयरको मूल्य दोस्रो बजारमा गएपछि दुई/तीन गुणा बढी हुन्छ । त्यसले सबै शेयरधनीलाई हकप्रद शेयरमा आवेदन दिन अनुरोध छ ।
अपि पावरले हालसम्म गरेका काम र अनुभव के–कस्ता छन् ?
हाम्रो यात्रा २०७० सालदेखि सुरु भएको हो । त्यसबेला सुदूरपश्चिममा हामीले निजी क्षेत्रबाट पहिलो पटक जलविद्युत् आयोजना बनाउने प्रयास गर्‍यौं । त्यसबेला धनगढी एयरपोर्टमा ‘लगानीमैत्री सुदूरपश्चिम, सुन्दर सुदूरपश्चिम’ लेखेको साइन बोर्ड राखिएको थियो ।
तर, बोर्डमा भने जसरी सुदूरपश्चिम सुन्दर भए पनि त्यो ठाउँ लगानीमैत्री भने थिएन । कारण, टाढा थियो, निजी क्षेत्रको त्यति धेरै सहभागिता पनि थिएन । त्यो अवस्थामा हामीले अध्ययन गर्दा हाइड्रो पावरको सम्भावना देख्यौं । त्यसमा पनि दार्चुला जानुको मुख्य कारणमा चाहिँ सरकारको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा थियो । उक्त आयोजना भएपछि त्यहाँ ग्रिडको ढोका खुल्यो । सरकारले नै दार्चुलादेखि अत्तेरियासम्म प्रसारण लाइन बनाएको थियो । त्यसमा निजी क्षेत्रको पनि प्रवेश हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो र चमेलिया आयोजना नजिकै जलविद्युत् आयोजना बनाउने निर्णय गरेका हौं । साढे ८ मेगावाटको नौगढ जलविद्युत् आयोजना बनाउन सुरु गर्‍यौं । त्यसमा नेपाल बैंकको अगुवाइमा वित्तीय व्यवस्थापन गरियो र निर्माण सुरु गरेको १७ महिनामै आयोजना सम्पन्न गर्न सफल भयौं । जलविद्युत् क्षेत्रमा सबैभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न भएको आयोजना नै यही हो ।
हामीले २०७२ बाट व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेका हौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भयौं र कम्पनीको शयर मूल्य पनि बढेर ९०० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । सुरु वर्षदेखि नै शेयरधनीलाई थोरै भए पनि लाभांश दिएका छौं । त्यसपछि नौगढ नदीमा ८ मेगावाटको माथिल्लो नौगढ आयोजना बनाउन थालेका हौं । उक्त आयोजना २०७५ देखि सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
अपि पावरमार्फत थप आयोजना बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ कि ?
पछिल्लो सयम हामी सरकारको ऊर्जा मिश्रणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै सोलार प्लान्ट प्रोजेक्टमा फोकस भएका छौं । अहिले रौतहटको चन्द्रानिगाहपुरमा चार मेगावाटको सोलार प्लान्ट निर्माण गरिरहेका छौं । सम्भवतः अबको दुई महिनामा उक्त आयोजना व्यावसायिक रूपमै सञ्चालनमा आउँछ । यस्तै, हावाबाट बिजलुी निकाल्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं । कतै उपयुक्त ठाउँ देखिए हावाबाट बिजुली निकाल्छौं ।
कम्पनीलाई बिजुली उत्पादनमा मात्र नभएर राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा पनि प्रवेश गराउनुपर्नेछ । यसका लागि सरकारले नै बाटो खुलाउनुपर्छ । विदेशी बजारमा आफैं दर निर्धारण गरेर विद्युत् विक्री गर्न सकियो भने कम्पनीलाई राम्रो हुन्छ । तसर्थ, हामी पराम्परागत शैलीको विद्युत् खरिद विक्रीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन भन्नेमा दृढ छौं ।
यस अलावा जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन साझेदारको खोजीमा छौं । यसका लागि कम्पनीले छुट्टै कमिटी बनाएर काम गरिरहेको छ । यस्तै, विदेशी साझेदारलाई लगानी गराउन ठूलो आयोजनाको पनि अध्ययन गरिरहेका छौं ।
नेपालमा १०० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको भनिन्छ । यो अवस्थामा तपाईंहरूको साझेदारीमार्फत १०० मेगावाटभन्दा ठूलो आयोजना बनाउने योजना हो ?
अहिले ठ्याक्कै नामचाहिँ नभनूँ । तर, हामीले ठूला आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको अवस्था पक्कै हो । विशेषगरी नदी प्रवाहमा आधारित भन्दा पनि स्टोरेज प्रोजेक्टको अध्ययन गरिरहेका छौं ।
यसका अलावा जलविद्युत् आयोजना र सोलार प्लान्टलाई कृषिसँग लिंकअप गरेर काम गर्ने योजना छ । अब व्यापारलाई विद्युत् विक्रीमा मात्र सीमित नराखेर विविधीकरण गर्ने योजनामा छौं ।
रौतहटमा जडान गरिएको सोलार प्लान्टको सोलार प्यानलमुनि बेसार खेती गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । यस्तै, हाइड्रोपावर परिसरमा पनि बृक्षरोपण, बाख्रापालन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको अवस्था छ । यस्तो व्यवसायबाट हुने आम्दानीले आयोजनाको सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सकियो भने विद्युत विक्रीबाट हुने आम्दानी बचत हुन्छ र नाफा बढ्छ । शेयरधनीहरूले पनि बढी लाभांश पाउन सक्नेछन् ।
दार्चुलामा ओखरको खेती हुन सक्ने देखिएको छ । त्यहाँका स्थानीयसँग सहकारी मोडलमा गर्न सकिने कृषि उद्यमको अध्ययन गरेका छौं ।
कम्पनीको व्यावसायिक योजना बग्रेल्ती रहेछन् । तपाईं स्वयंले कम्पनीको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
मैले अपि पावरको भविष्य सुनौलो देखेको छु । साढे ८ मेगावाटको आयोजनाबाट सुरु भएको हाम्रो यात्रामा अहिले ६० मेगावाटको आयोजना बन्न लागेको छ । प्रत्येक वर्ष नयाँ–नयाँ प्राजेक्ट जोड्दै जाने हाम्रो सिद्धान्त छ । ३० वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नैपर्छ । त्यस अवस्थामा हामी शेयरधनीको हात खाली नै हुन्छ । तसर्थ, नयाँ आयोजना थप्दै जाँदा राम्रो हुन्छ । आयोजना राष्ट्रियकरण भएपछि कम्पनी हुनुहुँदैन र कम्पनीसँग थप अन्य आयोजना पनि हुने गरि काम गर्नुपर्छ । कम्पनीलाई जीवन्त बनाने हाम्रो उद्देश्य हो ।
कम्पनीको शेयर बढीभन्दा बढी होल्ड गर्न र खरिद गर्न शेयरधनीलाई आग्रह छ । शेयरधनीहरूलाई उचित लाभांश दिने मामलामा हामी संवेदनशील छौं ।
कम्पनीमा १ लाख ६० हजार शेयरधनी छन् भन्नुभयो । शेयरधनीहरू कम्पनीको लाभांशप्रति सन्तुष्ट छन् ?
लाभांश भनेको बैंकको ब्याजदरभन्दा बढी हुनुपर्छ । हाम्रो सिद्धान्त यही हो । लगानीकर्ताले कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्ने कारण महत्वपूर्ण विषय हो । बैंकको ब्याजदरभन्दा कम लाभांश पाइन्छ भने लगानी गर्नको अर्थ हुँदैन । अहिले हामीले सोहीअनुसार दोहोरो अंकमा लाभांश दिने गरी काम गरिरहेका छौं । हामीले सुरुका वर्षदेखि नै एकल अंकको दरमा भए पनि लाभांश दिएका छौं । ऊर्जा क्षेत्रमा त्यो आफैमा राम्रो हो । निकट भविष्यमा दोहोरो अंकको लाभांश दिनेछौं । यसमा शेयरधनीहरू ढुक्क भए हुन्छ ।
अबको ३३ महिनामा ४० मेगावाटको चमेलिया सञ्चालनमा आउँछ । साथै, अबको दुई महिनामा नै चार मेगावाटको सोलार प्लान्टबाट व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन हुँदै छ । यी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि हाम्रो कारोबार आम्दानी दुवै बढ्छ । त्यसपछि हामीलाई दोहोरो अंकको लाभांश दिन समस्या हुँदैन ।
सँगै मर्जर तथा प्राप्तिको विषयलाई अगाडि बढाएका छौं । कुनै साना तथा समस्याग्रस्त कम्पनीलाई एक्वायर गरेर कम्पनीलाई अझ ठूलो बनाउने योजनामा छौं । त्यसका लागि एक मर्जर कमिटी बनेको अवस्था छ । उक्त कमिटीले वेल म्यानेज नभए समस्याग्रस्त कम्पनीहरू खोजिरहेको छ । त्यस्ता कम्पनी हामीसँग गाभिन तयार भए गाभ्न तयार छौं ।
२५ करोड लिटर पानी हुँदा पनि चौबीसै घण्टा दिन सक्ने अवस्था छैन[२०७७ बैशाख, १]
अहिलेकै अवस्था रहिरहे ५ वर्षमा आधा होटेल बन्द हुनेछन्[२०७७ चैत, २५]
दोहोरो अंकको लाभांश दिने गरी काम गरिरहेका छौं[२०७७ चैत, २३]
बीमाक्षेत्रको व्यवस्थित विकास हुनेगरी काम गर्नेछु[२०७७ चैत, १८]
शिवम् सिमेन्टको बजारलाई देशैभर पुर्‍याउने योजनामा छौं[२०७७ चैत, १८]